Iyo Apple Watch inogona kuona kutadza kwemoyo | Nhau dze iPhone
Chidzidzo chitsva chinosimudzira mukana iwoyo yedu Apple Watch inoona kutadza kwemoyo isati yaratidza zviratidzo kuburikidza ne electrocardiogram iri nyore inoitwa neApple smartwatch.
Mikana inopihwa neApple Watch maererano nehutano inoramba ichiwanda. Yakatanga yatanga iyo abnormal rhythm yekuona basa, tevere mukana we ita EKG pasofa kumba uchishandisa yako Apple Watch Series 4 (uye gare gare), uye ikozvino chidzidzo chitsva chakaitwa neMayo Clinic uye chakaunzwa kumusangano weSan Francisco weMoyo Rhythm Society inotora matanho ekutanga mukana wekuti kushandisa chishandiso chimwe chete, iyo imwechete-lead electrocardiogram yeApple Watch yedu, kukundikana kwemoyo kunogona kuonekwa uye nekudaro tanga kurapwa, isati yaratidza zviratidzo uye patova nekukuvara kusingagadzirisiki.
Ongororo iyi yakaitwa pachishandiswa 125.000 electrocardiograms kubva kuhuwandu hweUS uye kubva kune dzimwe nyika gumi neimwe, uye mhedzisiro yakapihwa pamusangano wambotaurwa inovimbisa. Kukundikana kwemoyo kunogona sei kuonekwa ne electrocardiogram iri nyore? Patova nealgorithm inobvumidza iwe kushandisa gumi nembiri-lead electrocardiogram (iyo iyo chiremba wako anoita neyakajairwa michina) pakuongororwa kwechirwere ichi, saka chavakaita muchidzidzo chino shandura iyo algorithm uye igadzirise kuti ishandiswe ne-single-lead electrocardiogram (iyo inokuita iwe Apple Watch). Sezvatinotaura, migumisiro yacho inovimbisa zvikuru uye inomiririra kufambira mberi kukuru mukuona uye kurapwa kwechirwere ichi, icho kana ichibudisa zviratidzo zvinenge zvatova padanho repamusoro, uye kuona kwekutanga kusingabvumiri kurapwa kunobudirira asiwo kunodzivirira. kukuvara kusingagadzirike.
Vazhinji vaive avo vakabvunza kubatsira kwekurapa kweApple Watch uye electrocardiogram yayo, asi nguva yakavaratidza kuti vaive vakanganisa, kwete chete ne zvidzidzo zvinotaridza nesainzi kubudirira kwechishandiso ichi chatinotakura paruoko, asiwo nemakesi chaiwo anotaura kuti Apple smartwatch yakavabatsira sei kudzora chirwere chavo. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti izvi zvakangotanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo Apple Watch yaigona kuona kutadza kwemoyo neEKG iri nyore
Mashandiro anoita Pegasus uye kuti ungaziva sei kana uine hutachiona